Gobolka Banaadir oo loo Magacaabay Gudoomiye Cusub – Radio Daljir
Oktoobar 26, 2015 8:25 b 0
Isniin, Oktoobar 26, 2015 (Daljir) —Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho ayaa loo magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale, kadib markii xilkaas laga qaaday Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) oo ahaa gudoomiyihii Gobalka Banaadir.
Warqada magacaabista Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaa goor dhow ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha, waxaana shaa cinaysa Wasaarada arimaha gudaha.
Magacaabistan ayaa ku soo beegantay saacado ka hor safar Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ugu ambabixi doono Boqortooyada Sacuudiga Carabiya.
Xil ka qaadista Guddoomiyihii Gobolka Banaadir Mr Muungaab ayaa ku soo aaday, iyadoo uu Muqdisho ka maqan yahay, isla markaana ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasoo uu howlo shaqo u joogo.
Guddoomiyaha cusub ee la magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa waxbarashadiida ku soo qaatay dalka Masar, waxaana uu ka mid ahaa Xisbigii Madaxweyne Xasan Sheekh ee PDP, isagoo ka ahaa Xoghayaha Arrimaha Gudaha.